Ny fanandramana tsara indrindra any an-trano - Ikkaro
firosoana >> Fanandramana trano
Ny fanandramana vita an-trano dia ny zavakanto amin'ny fampifangaroana ireo singa azonao zahana mora foana ao an-tranonao na fivarotana lehibe nefa tsy mila mandeha any amin'ny magazay manokana zahao na asehoy ny tranga siantifika sasany.
Raha bilaogy ankapobeny io, dia mety hanodidina ny DIY, ataovy ny tenanao sy ny forona isan-karazany, famaritana ny mekanisma ao anatin'izany ny elektronika. Saingy amin'ny toerana iray mifantoka amin'i Ikkaro, aiza ny zavatra rehetra dia DIY, siansa ary teknolojia namboarinay dia mino izahay fa ny zavatra rehetra dia tokony hatao amin'ny toerany.
Amin'ny fampiasana ny famaritana ny "Fanandramana", dia hanasokajianay ireo fanandramana an-trano izay tiana hahitana, hanamarinana na hanehoana fisehoan-javatra na fitsipika siantifika ao anatin'ny sehatry ny siansa fizikokimia sy voajanahary.
Manasokajy izahay Fanandramana ho an'ny ankizy. AZA MISY AZY
Nohavaozina 05/10/2018 -> Manomboka manoratra sy manidy karatra fanandramana vaovao izahay manasongadina teboka samihafa: Fitaovana, vidiny, ora fahavitana azy, taona nanondroana azy (amin'ity tranga ity dia manampy antsika ny psikology zaza amin'ny tranga fanandramana ho an'ny ankizy) sy izay azontsika ianarana, azavao na izay azontsika atao mba hampitomboina
Manantena aho fa tianao ilay tetikasa vaovao!
Fomba fanamboarana plastika amin'ny ronono na Galalith
Este andrana tsotra be izy io. Na dia ny plastika aza no tena noforonina, fa ny kétin, proteinina ronono, fa ny valin'ny andrana dia toa plastika ;) Misy miantso azy io hoe Bioplastic.
Ho fahalianana hanehoana hevitra dia lazao fa ity zava-mahadomelina ity dia nasiana patanty tamin'ny 1898 ary taona maro taty aoriana Coco Chanel Hampiasa ny «vato ronono»Na Galalith ho an'ny azy ireo Firavaka Fantasy.
Ny anarana hafa omena an'i Galalith dia: Galalite, vato ronono, vatam-piadiana.
Fomba fanamboarana lanezy volomparasy
Efa ela aho no te hanandrana manaova oram-panala. Ity dia asa-tanana izay hanampy antsika handravaka ny sehatra nahaterahantsika tamin'ny Krismasy na raha manao maodely amin'ireo ankizy isika ary te hanome azy io ny lanezy. Na mba handoto ny tanany fotsiny ary hipoaka.
Nanandrana fomba 5 hafa aho mba hanana lanezy artifisialy, asehoko azy ireo ary ampitahako izy ireo mandritra ilay lahatsoratra. Feno Internet fampianarana momba ny fomba fanaovana oram-panala amin'ny diapers ary hitako fa hetsika mampidi-doza io ary tsy mety amin'ny ankizy.
Taorian'ny andrana nahasosotra voalohany ahy dia tsy dia tiako loatra ilay traikefa hany ka nitady fomba bebe kokoa hanamboarana lanezy vita an-trano aho, amin'ny fomba azo antoka kokoa sy mahavariana kokoa ahafahanao manao mora amin'ny zanakao. Etsy ambany no anananao izany rehetra izany.
Raha te hanana vokatra oram-panala, lanezy na oram-panala eo no ho eo ny vokatra ara-barotra dia amporisihinay ireto
Avelao izy hanala,
Sepkina (lanezy volomparasy misy glitter)
Fomba fanamboarana jiro solika amin'ny volomboasary
Ity dia zavatra iray izay nampianarin'ny namako ahy efa ela, tamin'ny voasary sy menaka kely fotsiny ... Tohizo ny famakiana
Baiboleta famafazana ao an-trano
Iray amin'ireo balafomanga tsotra kokoa ary mahomby no hitako, ary hitako vitsivitsy vitsivitsy ;-) Miasa amin'ny fandoroana karazana aerosol, deodorant na spray hafa mitovy aminy, no vao mainka mirehitra.
Napetrako ao amin'ny lisitry ny zavatra tokony hataoko izany. Nefa raha manapa-kevitra ny hanao izany aho dia avelako miaraka aminao ilay horonantsary. Tsotra be. Ary raha vantany vao manao ny antsika isika dia ahantonay amin'ny fanatsarana izay ataontsika ;-)
Fitaratra tarihin'ny Infinity
Androany aho tonga hampahafantatra anao ny fomba fanaovana fitaratra misy LED izay mamorona tonelina tsy manam-petra. Vokatry ny optique mahafinaritra ary tiako hizara izany aminao.
Naharitra iray volana teo ho eo ny tetikasa hahazoana ny fitaovana rehetra. Izaho dia nanao horonantsary kely momba ny vokany ary miala tsiny mialoha noho ny kalitaony.
Ahoana ny fomba fanaovana adala ao an-trano
Raha mijery ny seho ianao The Hormigueroazo antoka fa efa nahita ianao Ilay adala. Io fitaovana (headphone) io miteraka fiakanakana mandre ny feonao manokana amin'ny fanemorana millisecond vitsivitsy rehefa miteny ianao
Ny fomba manaova adala an-trano tsotra dia tsotra izany, mila mampidina DAF (Delback Auditory Feedback) fotsiny isika izay hanao izany, mamerina ny tenintsika amin'ny fanemorana ireo milliseconds izay lazainay azy.
Distorter, ny Idiot amin'ny lalao kilalao
Misy lalao Hasbro ao nanova izay manao an'io mihitsy ary mahaliana kokoa ny filalaovan'ny mpianakavy fa tsy ny misintona ilay rindrambaiko fotsiny. Avelako ho anao ny rohy mividy
DAF ho an'ny Windows
DAF / FAF Assistant ho an'ny Windows
Valin-kafatra fanamarihana mihemotra - Miakanakana -DAF amin'ny Windows Pc
Fomba fanamboarana batterie misy sira an-trano
José Manuel Cano dia namela anay tao amin'ny pejin-tseraseranay Facebook, horonantsary bateria vita an-trano vita amin'ny ... Tohizo ny famakiana
Ahoana ny fomba fanaovana milina rotomoulding namboarina
Nitady ny fomba hanaovana a milina fanindronana plastika vita an-trano. Manana hevitra tsotra aho satria mila zavatra tena ifotony, saingy te hahita izay misy amin'ny Internet.
Ary mitady ny milina fanindronana hitako milina fanodinana tranoTena mahaliana ihany koa :)
Fomba fanaovana gel mangatsiaka mafana
Manao fanatanjahan-tena ve ianao? Aza? Azoko antoka fa fantatrao fa misy olona mahalala ary tonga feno mangana, be loatra sns sns ary milaza izy ireo fa tsara ny fanatanjahantena ;-)
Andro hafa taorian'ny fotoam-panofanana naharitra, nody aho ary malemy ny lohaliko ary ny zavatra mahazatra tokony hatao dia ny gilasy. Tao an-trano aho kitapo misy gel mafana sy mangatsiaka 3M Fa maninona no mividy iray raha mahavita azy ianao?
Misy ny vahaolana an-trano nentim-paharazana izay mampiasa paiso na vary mangatsiaka mangatsiaka hampiharana hatsiaka. Na dia fepetra tsy maharitra aza izany dia manana ny fatiantoka izy ireo fa tsy azo ampiasaina indray ary tsy manompo antsika hampihatra hafanana.
Ahoana ny fomba hanaovana fonosana gel hafanana mangatsiaka
Baibolin'ny rano indroa
Indraindray isika dia niresaka momba izany balafomanga rano. Fa ny sisa tavela anio dia asan'ny injenieran'ny fiaramanidina.
Izy io dia balafomanga misy dingana roa, izay mahatratra hatramin'ny 250 metatra ny haavony; mahavariana.
Sarin'ny balafomanga mba hahazoanao hevitra ny zavatra resahinay.
Eny; tavoahangin-drano izy ireo :)
pejy1 pejy2 ... pejy8 manaraka →